अपीलराज बोहरा/ हामी यस्तो समाजमा छौं, जहाँ लामो समयदेखि लागू औषधको कुलतमा फसेको आफ्नो छोराको विवाह गराएर उसलाई ‘सुधार्न’ बेहुलीका परिवारसँग सबै कुरा ढाँट्छौं । सामान्य रगत जाँचसमेत नगराई कुनै अवोध नारीसँग
महिनावारी हुँदा आमाको किरिया गरेँ : राधा पौडेल
राधा पौडेल/ राधा पौडेल । यो नामका पछाडि परिचय धेरै लुकेका छन् । पेसाले नर्स उनी सामाजिक अभियन्ता र साहित्यकार पनि हुन् । ०७१ मा ‘खलंगामा हमला’का लागि उनले मदन पुरस्कार पनि
नेपाली राजनीतिमा छिमेकी प्रभाव
खिमलाल देवकोटा/ मूलतः नेपाली राजनीति के आफ्नै बलबुता र प्रभावमा सञ्चालित छ ? सर्वत्र प्रश्नैप्रश्न र यदाकदा नकारात्मक टिप्पणीसमेत हुने गरेका छन् । आजको भूमण्डलीकरणको जमानामा कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नै बलबुतामा मात्रै
लाओस राई/ सन् १७७६ पछी पुंजीबादको पिता मानिने आदम स्मिथले आर्थिक मानवको कल्पना गर्दै सम्पूर्ण मानबीय कार्य र क्रियाकलापलाई केवल धनको आर्जन र संचयको रुपमा ब्याख्या गरे । धन कमाउन र
संजिव कार्की/ जातीय राजनीतिको कुरुपता प्रतिभा छनोटमा पनि देखिनु सभ्य समाज र आधुनिक मानव समाजको लागि पक्कै पनि अशोभनीय हुनुको पराकाष्ठा हो । राजनीतिको घिनलाग्दो स्वरूप अनि राजनीतिको नाममा मौलाएको संकीर्ण जातीयताबाद,
काठमाडौं,बैशाख । चुनावि चहलपहल बढेसंगैँ कावासोतीमा ट्राफिक नियम अल्लङ्गन हुन थालेको छ । चुनावको प्रचारप्रसारमा खटिएका दलहरुले बसको छतमा कायकर्ता भरेर प्रचारका लोको देखीएको छ । साथै सवारी साधनमा क्षमता भन्दा
वर्तमान सत्तागठबन्धन भत्काएर नयाँ बनाउने कसरत्त !
रघुनाथ बजगाँई काठमाडौँ, बैशाख । स्थानीय तहको निर्वाचन आउन केहि दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि संविधान संसोधन विधेययको रन्कोले ठुला दलहरुका शिर्ष नेतृत्वलाई छाडेको छैन् । यसको खास सम्वन्ध सरकार गठन र
मनमा आँट भए गाउँको विकाश टाढा छैन
विरेन्द्र पाण्डे, लमजुङ् । नेपाल अर्थतन्त्रमा गरीब राष्ट्रमा चिनिएको मुलुक हो । रोजगरीको शिलशिलामा यहाँका हजारौहजारौ यूवाहरु विदेश पलाएन हुन बाध्य बनेका छन । आफ्नो गाउँघर पाखापखेरा बुवा आमा साथिभाईको सबैको
संविधान कार्यन्वयनको आधार बर्ष २०७३ को बिदाई
रघुनाथ बजगाँई । २०७२ सालमा जारी भएको संविधान कार्यन्वयन गर्ने अठोटका साथ सुरु भएको २०७३ लक्ष्य उन्मुख भएर बिदा हुँदैछ । उपलब्धी मापनले सरकारी प्राथमिकता र जनअपेक्षामा मेल नखाएपनि संवैधानिक दायराभित्रै
रघुनाथ बजगाँई, आफ्ना माग पुरा नभए स्थानीय निर्वाचन बहिष्कार गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा अब के गर्ने भन्नेमा अन्योलमा छ । आफैँ संविधान संसोधनमा बहुमत जुटाउन नसक्ने र